MaHaBote | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
MaHaBote	← Older posts
# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်းPublished June 30, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	ကိုယ့်မှာ ပြဿနာ တစ်ခုခု ရှိလာပြီဆိုရင် ဗေဒင်ဆရာနဲ့ ပြဿနာကို အဖြေရှာချင်ကြသူများအတွက် အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်းလေး တစ်ခုကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဗေဒင်မေးချင်ပြီဆိုရင်လည်း ဗေဒင်ဆရာ ရှာရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးလှဘူးဗျ။ ကိုယ်မေးချင်တဲ့ ကိစ္စကို ဟောနိုင်တဲ့ဆရာကို ရှာရတယ်။ဟောတာ မှန်/မမှန်ကို လည်း စုံစမ်းရသေးတယ်။ နောက်ပြီး ခြောက်လုံးလှန့်လုံးတွေပေး မျှော်လင့်ချက်တွေပေးပြီး “ယတြာ” နဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ဆရာလိမ် ၊ ဆရာတုတွေနဲ့ တွေ့မှာလည်း ကြောက်ရသေး သဗျ။
Posted in ဂမ္ဘီရ | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, ကိုယ်တိုင်မေး ဗေဒင်, စာချခြင်း, တရုတ်ရိုးရာ ဗေဒင်, ယိချင်း ဗေဒင်, အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်, ဗေဒင် အလွယ်မေးနည်း	# တော်ဝင်တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲPublished May 7, 2011 | By Dr.Tin Bo Bo	ပြီးခဲ့တဲ့ ဧပြီလ (၂၉)ရက်နေ့ကတော့ အင်္ဂလန် တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အုတ်အော် သောင်းတင်း ဖြစ်ရတဲ့ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကြီး တစ်ခု ကျင်းပခဲ့တာကို Sky Net ရုပ်သံလိုင်းကနေ Live လွှင့်ပေးတာကို ကြည့်လိုက်ရသဗျာ။ အတော့်ကို ကြီးကျယ် ခမ်းနားတာကလား။ မြန်မာနိုင်ငံက ကြီးကျယ်ခမ်းနား လှပါတယ်ဆိုတဲ့ မင်္ဂလာပွဲကြီးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်တော့ “ရပ်ကွက်အငြိမ့် နဲ့ အော်ပရာပြဇာတ်” ဆိုတာလို ဖြစ်နေတော့တာကိုး။
Posted in မဟာဘုတ် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, မဟာဘုတ်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	# ဖုန်းရွှေ လာပြီPublished September 27, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အမှာ သတင်းစကား | Tagged domain & hosting အခမဲ့, MaHaBote, Myanmar Astrology, ကလောင်သစ်, ကလောင်သစ် များအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း, ဘလော့ဂါ, ဘလော့ဂါ အသစ်များအား ဖိတ်ခေါ်ခြင်း, ဘလော့ဂ်	# ထူးတဲ့ ကိုး (9)Published September 8, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in သင်္ချာဗေဒ | Tagged9ဂဏန်း သင်္ချာ,9ဂဏန်းဖွားများ, burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ထူးတဲ့ ကိုး (9), ထူးတဲ့ ၉, ၉ ဂဏန်း ဆိုရင်, ၉ ဂဏန်း အကြောင်း	# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင်Published August 22, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဟူးရားဗေဒင် | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, လျှပ်တစ်ပြက် ဗေဒင်, ဟူးရား ဗေဒင်, အပျော်တမ်း ဗေဒင်, မြန်မာဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်	# တိုင် အတိတ် / တိုင် နိမိတ်Published August 18, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာ/မဟာကာလ | Tagged burmese horoscope, MaHaBote, Myanmar Astrology, myanmar horoscope, ယုံတမ်းစကား, သတင်းပေးသူ, ကောလာဟလ, ၀ါဒဖြန့်ခြင်း	# အိပ်မက် . . (၂)Published August 12, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ် | Tagged MaHaBote, Myanmar Astrology, မဟာဘုတ်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	← Older posts
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,809)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,989)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,858)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,394)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,455)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,591)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,617)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,979)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,307)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,274)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,111)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,054)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,846)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,812)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,304)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,137)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,504)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,192)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,186)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,684)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,661)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,554)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,267)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,245)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,912)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,701)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,482)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,030)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !